एकाएक भ्रमण छोट्याएर किन नेपाल फर्किए प्रचण्ड ? – ताजा समाचार
एकाएक भ्रमण छोट्याएर किन नेपाल फर्किए प्रचण्ड ?
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबईको पाँच दिने पारिवारिक भ्रमण पुरा गरी शनिवार राति स्वदेश फर्किएका छन्। साउन १४ गते मंगलवार परिवारका सदस्यहरुसहित दुबई भ्रमणमा गएका अध्यक्ष प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्।
पत्नी सीताले लामो समयदेखि दुबई घुम्न जाने इच्छा राखेका कारण उनको इच्छा अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड दुबई गएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डसहित छोरीहरु रेणु र गंगासँगै नाति नातिनी पनि त्यसतर्फ गएका थिए।
सीता लामो समयदेखि बिरामी छिन्। अध्यक्ष दाहलले उनको सिंगापुरमा लामो उपचार गराएका थिए। त्यसपछि नेपालमै पनि सीता प्राकृतिक उपचार गरिएको थियो। श्रीमती दाहालमा प्रेसर, सुगर लगायतका समस्या छन्।
प्रचण्ड एकाएक भ्रमण छोट्याएर किन नेपाल फर्किए त भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा चिन्ता लिनेहरुले अर्थपुर्ण रुपमा हेरीरहेका छन् । प्रचण्डको सचिवालयले यस सम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि शनिबार सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री ओली शनिबार बेलुका ९:४५ बजे सिल्क एयरमार्फत सिंगापुर तर्फ उडेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ओलीको साथमा निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह पनि छन् । सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा ओलीले करिब १ साता स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । उनको के–के परीक्षण गरिँदैछ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २००७ मा दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ एपोलो अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए । त्यसयता उनले दिल्ली र थाइल्यान्ड पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनी नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विदेश गएका छैनन् । यसअघि स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनामोहन कार्डिओथोरासिक एण्ड भाष्कुलर सेन्टरमा भर्ना नै भएर उनले उपचार गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आगामी शनिबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।